Milamina | mandimby maharo
Posted on 7 July 2012 by Mandimby Maharo
Taorian’ny nisamboran’ny EmmoReg ny naman’izy ireo ny Alarobia 04 jolay teo antokotanin(ny Hopitaly JRA dia nametraka sora-baventy manao hoe “TSY ATO REMENABILA…” ireo mpitsabo mpanampy mitokona ao.
Nanaitra ny maro tokoa manko iny fihetsika iray nataon’ny Jeneraly Ravalomanana Richard indray mitoraka iny. Ilay fanaovana Réquisition Verbale ary tonga dia miaraka amin’ny fisamborana sy fitazonana any amin’ny toby avy hatrany ilay mpitsabo mpianampy nifamaly taminy no ohatra nahasadaikatra ny be sy y maro. Maro no nanameloka, teo koa ireo nankasitraka satria nanaporofo fa tena mndray andraikitra tokoa eo amin’ny fiainan’ny olona andavanandro ny zandary. Satria tokoa manko dia tsy nipetrapeta-poana izy ireo iny andro manontolo iny. Ankoatry ny fandaminana ny fidirana tao amin’ny kianjaben’ny Mahamasina tamin’ilay lalao baolina lavalava iraisam-pirenena izay nanapahan’izy ireo ny hampiditra maimaimpoana izay rehetra tonga teo dia nitaona ireo naratra tamin’ilay fifanosehana teo ampiravana koa izy ireo. Raha ny momba ilay fifanosehana aloha dia fahadisoan’ny avy ao amin’ny federasiona hono ireny hoy ilay Jeneraly satria tsy noantso fanampiana avy aminy ny federasiona fa mpitandro filaminana 100 fotsiny no nantsoiny. Tsy novohan’ny mpikarakara mialoha koa ny vavahady ka izay no nahatonga io fitohanana io. Voatery nandray andraikitra izy ireo noho izany.
Sady mahatsikaiky no mahatonga saina ihany tokoa nefa ilay soratra eo amin’ny vavahadin’ny HJRA. Toa milaza fa tsy dahalo ireo mpiasa ao ka anamparana hery sy samborina. Tato ato tokoa dia hita fa toa lasa eso-teny ataon’ny olona ny mpitandro filainana ny tsy mbola nahazoana io dahalo raindahiny io nefa rah any fizahozahoana atao isanandro eny amin’ny haino aman-jery ataonireo lehibe ao amin’ny fitandroana ny filaminana dia toa tena mandry ny tany.
Ny tsapa koa dia tsy dia ny filaminana teo ampidirana tao Mahamasina loatra no tena nahatonga ireto EmmoReg ireto nidina teo fa noho ny fahafantarana ny fanatrehan’i Andry Rajoelina ireo lalao ireo. 100 monja no nalain’ny mpikarakara ny lalao satria izay ny zakan’ny vola nenti-nanana. Iarahana mahalala fa omena vola ireo mpitandro filaminana ireo fa tsy hanaiky handamina fotsiny amin’izao. Na izany na tsy izany dia efa re izay izany izao fa dia azo antsoina HIASA MAIMAIMPOANA ny Jeneraly Ravalomanana rehafa hikarakara lanonana. Amin’izay mbola tsy fahasamborana an-dRemenabila izay, aleo tokoa miantso manampahaizana manokana amin’ny fitandroana ny filaminana niofana tany ivelany, sao sanatria ka ho avy hadrava ny lanonana ireo dahalo ireo.